Dematting Comb Soosaarayaasha & Alaab-qeybiyeyaasha | Shiinaha Dematting Warshadaha shanlada
3 Gudaha 1 Qalabka Daabacida Xayawaanka
3 1 Qalabka Kala daadinta ee loo yaqaan 'Rotatable Pet Shedding Tool' wuxuu isku daraa dhamaan shaqooyinka kala daadinta quudinta iyo isku shaandheynta joogtada ah Dhammaan shanlooyinkayagu waxay ka sameysan yihiin bir bir ah .markaas waa kuwo aad u waara.
Riix badhanka dhexe oo wareeji 3 1 qalabka daadinta xayawaanka la rogi karo si aad u bedesho howlaha aad rabto.
Shanlada daadinaysa waxay ka saartaa jaakad dhinta iyo timo dheeri ah si hufan.Waxay kuu noqon doontaa caawiyahaaga ugu fiican inta lagu jiro xilliyada daadinta.
shanlada wax lagu shubo waxay leedahay 17 bladood, sidaa darteed way iska saari kartaa guntimaha, dhaldhalaalka iyo dermaha si fudud. caleemaha waa kuwo wareegsan oo ammaan ah.Waxaa yeeli doonin xayawaankaaga xayawaankaaga oo lebbiskaaga dhogorta dheer leh oo dhalaalaya
Midka ugu dambeeya ayaa ah shanlo joogto ah. Shanleyntani waxay leedahay ilkaha oo aad u kala fog. Sidaa darteed waxay ka saartaa dander iyo boodada aad u fudud. Waxay sidoo kale ku fiican tahay meelaha xasaasiga ah sida dhegaha, qoorta, dabada iyo caloosha.